Marqaanmedia|Daily News » TOP NEWS+DAAWO VIDEO: Madaxweynaha Puntland Booqashadii uu ku Tagay Qandala iyo Xaalada Layaab leh+Hub Lagu Soo Bandhigay
TOP NEWS+DAAWO VIDEO: Madaxweynaha Puntland Booqashadii uu ku Tagay Qandala iyo Xaalada Layaab leh+Hub Lagu Soo Bandhigay
January 10, 2017 - Written by mar - Edited bymar
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa si diiran loogu soo dhoweeyey degmada Qandala oo ka tirsan Gobolka Bari, waxaana dadweynaha degmadaasi ay ku faraxsanaayeen booqashada uu Madaxweynuhu ugu tagay.
Madaxweynaha ayaa uga mahad celiyay bulshada degmada Qandala soo dhoweynta wanaagsan ee ay u sameeyeen isaga iyo wafdiga la socday, madaxweynaha ayaa booqday xarumaha Dawladda iyo kuwa shacabka ee degmada Qandala wuxuuna sheegay in Dawladda Puntland ay difaacayso dhamaan deegaanada Puntland.
4 Responses to TOP NEWS+DAAWO VIDEO: Madaxweynaha Puntland Booqashadii uu ku Tagay Qandala iyo Xaalada Layaab leh+Hub Lagu Soo Bandhigay
Siciid says:	January 10, 2017 at 8:32 pm	Soo soco oo ciida ham sii. HG xageebay galaysaa???
Yaa arkay mooryaantii Hg ee Ali Afjaahuur iyo Cubeyn dabacayuun?
Galnus Nus-nus rubuc bar iyo taaano oo lagu kala dhaqaaqay meelwalbana dabka la qabadsiiyay, xagee u baxsadeen Guuleed iyo dabdhilifyadiisii ee carabay ugu weynaa?? Lagactii burcad badeeda ee keenya iyo ugaandha in lagu dhaqo loo geeyay iyo raga watay waa la garanayaa waana la qabanayaa. sheeko dhamaatay.
Meeqaan idinlahaa war isma xukumi kartaane meesha aad joogtaan isu dhiibaa 12-jir Daarood haduu idinka agdhoiwyahay.
Anigu mar hore ayaan sheegay in nimankaa Ahlu-sunnah wax dhaama inaysan meesha joogin ee iyaga hala citiraafo guuleedna hilfaha haloo tuuro.
Dabkii meelwalba wuu gaaray, Agooye usbuuc ayay u qabatay inay cadaado ku laabtaan oo wax walba oo isbaaro dadka lagu baaran jiray laga tirtiro hadii kale wacad waxay ku mareen in ay Hg dabka qabadsiin doonaan.
Waxa u harsan waa in lagu laabto meeshii markii hore laga soo kiciyay iyo cuntadii hore ee MOXOGA iyo FALFALIIRKA ahayd.
Baasto iyo moos way dhamaadeen iyo baad danbe, Guuleedna xabsiga gaalshire ha iska xaadiriyo waxaa loo haystaa dadka uu dhiigooda qubay oo sidaa loogaba hari maayo.
Aaway habrihii, bilaaba moxoga iyo falfaliirka, ciidana ham siiya.
Cismaan Cawad says:	January 10, 2017 at 8:59 pm	Cabdi Weli Gaas Puntland iyo Daarood oo dhan hankoodii ayuu god ku riday. Waxaa lagu xantaa in uu yahay ninka oogu aqoon sarreeya inta madax Daarood ah ee dalka joogta oo weliba uu shahaadada ugu sarreysa ku haystaa maaddada oogu muhiimsan ee dhaqaalaha.
Waxaa amankaag igu noqday waxaa Cabdi Weli Gaas maankiisa daaha ka saaray in uu dhaahdo in ay Daaroodku maanta ku fadhiyo dhulka Soomaaliya oogu baaxadda weyn, oogu xeeb dheer, oogu bad weyn, oogu dekado badan, oogu kheyraad iyo dad badan, oogu eeraboodho badan ee weliba goobo straatiji ahna ku yaalla. Min Jubbaland ilaa Gedo ilaa Wardheer ilaa Danood iyo Puntland oo dhan ayuu Daaroodku isku wada taxan yahay. Waxaa u sii raaca inta u dhaxaysaa ilaa jigjiga iyo Qabri Dahar. Inta Xamar loo hanqal taagayo maxaa madaxdan Daarood ka madoobeeyay in ay dadkan iyo degalladoodan ganacsi iyo dhaqaale ahaan isku xidhaan oo dalka oogu qanisanaadaan? Maxaa damiirkii iyo dareenkii ka qaaday?
Hassan says:	January 10, 2017 at 11:51 pm	Osman Awad waa assibtay! iyagoon Soomalida kale xummaan uqaadayn haddana uma muuqato waxa a haystaan. Taasna waxaan ugu wacan rag wata damac siyaasadeed iyo dan shaqsiyadeed oo aan cidna meel gaarsiinayn.
Kuwii dowladihii rayidka ahaa ku jiray ayagaa ugu horreeyay inay dhulkooda ka guuraan xidhiidhkana u jaraan bixiyayna magacyada ay ka midyihiin Gaadhi waa!! Maxamed Siyaad Daaroodna wuu la dagaalamay dhulka uu kasoo jeedaana maanta waa ka ugu dibu dhacsan Somaaliya! Abdullahi Allah ha u naxariistee wuxuu sameeyay tanaasulaad badan oo maanta caqabad ku ah reer Puntland si uu isagu dantiisa madanimo u gaadho. Inaga Gaas jidkaas buu hayaa. Takale ee beeshaan waxaa ilaahay ku ibtileeyay raadin Soomaalinimo oo aan cid kale rabin. Kuwii kafantooda tolayay bay kabahooda tolayaan. Addeerrayaaloow iyadoon lays xumamynayn “Geel jire geela wuu wada jirtaa waanu kala jirtaa” Soomaaliya waa la wada leeyahay waana lakala leeyahay ee reerku dhulkooda ha horumarsadaan.
Maxaa udiiday inay samaystaan laami isku xidha xaafuun ilaa laas qoray. Dhulkaa xeebaha ku teedsan ee aad ujeedaan bilicdiisa waa wada cidlo. Dhulka noocaas ahi waa dhulka ugu qaalisan adduunyada kale. Meel xeebuhu iska banaanyihiin dhulkii kale ee cidlada ahaana boos kama gadan kartid!!!
Waxaan xasuustaa shir lagaga doodayay Federaalka oo Garowe lagu qabtay 2014-kii oo ay gabadh yari ka hadashay tidhina ” Aningu waxaan ku caqliyaystay maamulka iyo dowladda Puntland, marka kaliya aan maqlo dowlad Soomaaliyeedna waa mar ay is hastaan ama xaaladi ka dhextaagantahay dowladeyda Puntland! marka maxaan ku aaminaa ama ku taageeraa dawlad dagaal iyo hagardaamo joogta ah kula jirtay taydii??” I call this “Organic Puntlander”
Waxaan aamin sanahay dadka noocaas ah ayuunbaa hogaamin kara ummadaan waanay gaadheen da’dii ay siyaasadda kaga qayb geli lahaayeen.
Kuwa xamar u hanqal taagaya waqtigoodu waa gabaabsi minority baanay noqon doonaan
Xalane says:	January 11, 2017 at 12:37 am	Suldaan Cismaan Cawad
Anigu waxaan xasuustaa adiga oo taageero weyn uhaya Madaxweyne Gaas waa markii la doortey!!!!! Eedeyn ku haya kuwa taageersanaa Dowladii ka horeysay ee Madaxweyne Faroole? Sax ma ahey?
Waad fahantey maanta. Laakiin shahaado iyo macalinimo jaamacadeed lagumo hogaamiyo shacab, ee waxaa lagu hogaamiyaa shacab ama wadan waayo aragnimo iyo codkarnimo. Labaduna malaha Madaxweyne Gaas…………………..
Madaxweyne Gaas ha agdhigin halyey AUN Madaxweyne c/laahi Yuusuf waa ceeb boqol sano oo socota gaarimaayo.
Xagee bey joogtaa Puntlandta Madaxweyne Gaas maanta????????????????